Ny Asan'ny Apostoly 20,28-38.
Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra, nanendren'ny Fanahy Masina anareo ho mpitandrina mba hifehezanareo Eglizin'ny Tompo izay novidiny tamin'ny rany.
Fantatro fa rahefa lasa aho, dia hisy amboadia masiaka hiditra eo aminareo, izay tsy hitsitsy ny ondry.
Ary ny sasany avy aminareo aza dia hitsangana hampianatra hevi-diso, ka hitaona ny mpianatra hanaraka azy.
Koa miambena re, ary tsarovy lahy fa telo taona maninjitra anie aho no tsy nitsahatra andro aman'alina nananatra anareo tsirairay avy tamin-dranomaso!
Ary ankehitriny, ankiniko amin'Andriamanitra sy amin'ny tenim-pahasoavany hianareo, dia amin'ilay mahay mandavorary sy manome lova anareo miaraka amin'izay efa masina rehetra.
Tsy mba naniry izay volafotsy, na volamena, na fitafian'olona aho.
Fantatrareo fa ireto tànana ireto no nahazoako izay rehetra nilaiko sy nilain'izay rehetra niaraka tamiko.
Nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tsy maintsy hiasa toy izany koa hianareo mba hanampiana ny mahantra, ka hahatsiaro ny tenin'i Jesoa Tompo manao hoe: Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.
Nony avy nilaza izany izy, dia nandohalika ka niara-nivavaka tamin'izy rehetra.
Ary nitomany mafy izy rehetra, sy namihina ny vozon'i Paoly ary nanoroka azy,
fa nalahelo loatra izy, indrindra ange fa tamin'ny nilazany hoe: Tsy hahita ny tarehiko intsony hianareo. Dia nanatitra azy hatreny antsambo izy ireo.
Mandidia ny fahefanao, ry Andriamanitra, hamafiso izay nataonao ho anay, ry Andriamanitra!
Ao amin'ny fitoerana masina, ao an-tampon'i Jerosalema, no hanoloran'ny mpanjaka fanatitra ho anao.
Mihirà ho an'Andriamanitra hianareo, fanjakana eto an-tany, mankalazà ny Tompo hianareo! - Selà.
Mihirà ho an'ilay lanjaina ao ambonin'ny lanitra, ny lanitra fahagola. Indro izy, mampandre ny feony, feo mahery!
Maneke ny fahefan'Andriamanitra! Ny fiandrianany ao amin'Israely, ny fahefany eny amin'ny rahona.
Mahatahotra hianao, ry Andriamanitra, eo amin'ny fitoeranao masina! Manome hery aman-pahefana ny vahoakany, ny Andriamanitr'Israely. Isaorana anie Andriamanitra!
Evanjely Masin'i Jesoa kristy Nosoratan'i Md. Joany 17,11b-19.
Rehefa izany dia hoy i Jesoa. Ray masina ô, tahirizo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray tahaka antsika izy.
raha mbola teo amin'izy ireo aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, mba ho tanteraka ny Soratra Masina.
Ankehitriny mankany aminao aho, ka manao izany fangatahana izany dieny mbola amin'izao tontolo izao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy.
Nomeko azy ny teninao, ka halan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy maha-olon'izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon'izao tontolo izao azy koa.
Tsy ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin'ny ratsy.
Tahaka ny tsy maha-olon'izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon'izao tontolo izao azy ireo koa.
Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana.
Tahaka ny nanirahanao ahy ho ao amin'izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin'izao tontolo izao koa.
Manamasina ny tenako ho azy ireo aho, mba hohamasinina amin'ny fahamarinana koa izy.